Ahoana ny fametrahana webcam raha tsy misy CD 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ahoana ny fametrahana webcam raha tsy misy CD
Vao haingana ianao no nividy webcam hifandraisana amin'ny solo-sainanao hanaovana antso an-tsary amin'ireo namana, fianakaviana ary mpiara-miasa aminao saingy hitanao fa ao anaty fonosana dia tsy misy kapila hametrahana ireo programa sy mpamily ilaina amin'ny fampandehanana ilay fitaovana ary, noho izany, tianao ny mahatakatra ny fomba fanasitranana? Raha izany no izy dia lazaiko fa soa ihany ho anao, nahita tutorial tsy nety ianao tamin'ny fotoana tsy nety. Raha omenao ahy ny sasany amin'ny sainao, raha ny marina dia azoko atao ny manazava amin'ny antsipiriany ny fomba fametrahana webcam tsy misy CD.
Amin'ireto andalana manaraka ireto dia ho hitanao tsara ny fomba fanatanterahana ilay hetsika etsy ambony, na avy amin'ny Windows na macOS, na amin'ny solosaina birao na amin'ny solosaina finday. Efa tsinjoviko fa mora kokoa noho ny nieritreretanao azy io ary ny maha «geek» azy dia tsy tena ilaina mba hahomby amin'ny orinasa.
Avy eo? Ahoana ny farany amin'ny fanariana ny lahateny sy ny fahazoana miasa? Ie? Tsara! Mipetraha tsara, manomeza minitra malalaka vitsivitsy ho anao fotsiny ary mifantoha amin'ny famakiana ity manaraka ity ary, mazava ho azy, mampihatra ny torolalako. Azoko antoka fa amin'ny farany ianao dia afaka milaza tena faly sy afa-po, na amin'ny fanatanterahana ny tanjonao na amin'ny fahaizanao nanao ny zava-drehetra taminao.
Ahoana ny fametrahana webcam tsy misy CD amin'ny PC
Ahoana ny fametrahana webcam raha tsy misy CD amin'ny Mac
Alohan'ny hahatongavantsika any am-pon'ny mpitari-dalana, dia andao hazavao hoe inona ireo dingana hahomby. mametraka webcam tsy misy CD, misy vitsivitsy vonjimaika mialoha ny zavatra tsy maintsy ataonao mba hahazoana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra.
Voalohany, mariho fa amin'ny ankabeazany solosaina finday ny webcam dia vaovao kokoa tafiditra. Sui PC raikitrana izany aza dia tsy fahita firy izany ary tsy maintsy mividy webcam ianao raha te hifandray ivelany. Saingy, hafa ny toe-javatra ho an'ny Mac. Amin'ny solosaina marika Apple, na MacBook na iMac, naorina foana ny webcam. Amin'io lafiny io, raha mila mampiasa webcam ivelany ianao fa mbola tsy nividy azy ary te hahazo torohevitra momba izay tokony hatao, dia manoro hevitra anao aho hanantona ny bokiko mividy manokana.
Izany dia nilaza, raha ny momba ny webcam «standard» dia tsy ilaina ny fametrahana na fametrahana azy, satria efa vonona hampiasa hatramin'ny nanombohan'ny solosaina voalohany. Ho an'ny webcam mifandray ivelany, etsy ankilany, raha te hitrandraka azy dia tsy maintsy esorinao amin'ny fonosana aloha ary avy eo ampifandraiso ilay fitaovana amin'ny solosaina, amin'ny fampiasana USB tariby, mampiditra ny faran'izay tery ao anaty port Webcam (rehefa tsy tafiditra ny tariby) ary ny iray kosa mankany amin'ny port amin'ny PC.
Raha feno ny seranan-tsambo USB ao amin'ny solosainao, dia mety te hividy iray ianao hampifandraisana ilay webcam USB USB, afaka mahazo seranana marobe avy amin'ny mpampitohy tokana, raha toa ka mampiasa Mac tsy misy seranan-tsambo USB-C fotsiny ianao ary ny webcam misy anao dia manana mpampifandray USB mahazatra, dia tsy maintsy manahy ianao mahita ny Adattatore na hub manome USB-C mankany USB-A.
Raha vantany vao tafapetraka ny fifandraisana, ny fampiasana CD ho an'ireo mpamily hampiasana webcam dia matetika no tsy ilaina, satria samy afaka ny Windows sy ny macOS. fizakan, hahitanao izay rehetra ilainao hampandeha tsara ilay fitaovana.
Indraindray anefa, mety hitranga fa ny rafitra miasa dia tsy afaka mahita ny mpamily ho azy. Amin'ity tranga ity, raha toa ka tsy misy na tsy azo ampiasaina ny kapila fametrahana webcam dia mbola azonao atao ny mahita ireo rakitra ilaina amin'ny fametrahana azy amin'ny fanaovana fikarohana Google amin'ny teny lakile toa ny "Ampidino ny mpamily [maodely marika sy webcam]" na mitsidika mivantana ny fizarana na fanampiana tranokala mpanamboatra ny fitaovana.
Misy koa andriamanitra rindrambaiko nampiasaina manokana ho an'ity tanjona ity, toy ireo izay nampahafantariko anao tamin'ny famerenako ireo programa mpamily. Na izany na tsy izany, torohevitra hatrany ny hijery ny fahamendrehan'ny loharano hikarohana mpamily, hialana amin'ny fisintomana programa izay tsy mety amin'ny fitaovana ampiasaina na, mbola ratsy kokoa aza. Ho ahy manokana dia manoro hevitra anao aho fa mila fitaovana avy amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra.
Amin'ity fotoana ity dia hiteny aho fa afaka mandray ny tena hetsika ihany isika amin'ny farany ary mamantatra ny fomba hanaovana azy. hametraka webcam tsy misy CD amin'ny PC-nao. Etsy ambany, noho izany, dia ho hitanao ny fomba fanaovana azy am-baravarankely, na miasa amin'ny solosaina namboatra ahoana izany portable.
Raha liana aminao ny hahatakatra ny fomba fihetsika mametraha webcam Logitech tsy misy CD, ahoana no fandehanana hametraka webcam Trust raha tsy misy CD na marika hafao PC solosaina, ny dingana voalohany ilainao atao dia ny mampifandray ilay fitaovana amin'ny solosaina.
Avy eo miandry ny fampahafantarana manondro fa ny webcam dia neken'ny rafitra fandidiana ho azy ary ny mpamiliny dia napetraka ao amin'ny Windows. Aorian'izay dia azonao atao ny manomboka mampiasa webcam amin'ny alàlan'ny programa samihafa izay mampiasa azy.
Raha toa ka tsy mandeha ho azy ny fomba etsy ambony dia miroso amin'ny "tanana", amin'ny fampiasana Fitaovana fitantanana fitaovana, ilay fitaovana tafiditra ao amin'ny Windows izay ahafahanao mijery sy mitantana ireo peripheraly mifandray amin'ny solosainao.
Noho izany, atombohy amin'ny fipihana izany Bokotra hanombohana (ilay miaraka amin'ny fitetezana varavarankely) izay hita any amin'ny ilany havia ambany barra de tareasmifantina ny rohy Tontonana fanaraha-maso manatrika fanombohana menio ary avy eo ny feo Hardware sy feo ary / na inona Fitaovana fitantanana fitaovana (arakaraka ny karazana fampisehoana namboarina), eo amin'ny baravarankely pop-up desktop.
Ao amin'ny varavarankely vaovao aseho eo amin'ny efijery amin'izao fotoana izao, tadiavo ilay zavatra fakan-tsary ary tsindrio amin'izato lokony eo akaikiny, hanitatra ny lisitrao. Raha ny lisitry ny fitaovana aseho dia mampiseho ny anarana webcam mifandray amin'ny PC, tsy mila manao na inona na inona ianao, satria mifandray tsara amin'ny PC ilay fitaovana ary voamarika tsy misy olana.
Fa eny tsy voatanisa ny webcam na eny ny kisary dia semitransparent na manolotra a marika mavo mifanaraka amin'izany, mazava ho azy fa misy ny olana amin'ny fikarohana sy / na ny fikirakirana ny fitaovana.
Mba hamahana azy, amin'ny tranga misy fitaovana tsy voatanisa dia alao antoka aloha fa nampifandray tsara ny webcam tamin'ny solosaina ianao, avy eo tsindrio ny bokotra havanana fakan-tsary, safidio ny lahatsoratra Hamarino ny fanovana hardware ao amin'ny menio afovoany miseho ary miandry ny famelombelona ny lisitry ny fitaovana.
Raha miseho ny kisary semi-mangarahara na ny mavo mavo, tsindrio havanana amin'ny anaran'ny webcam ary safidio ilay entana hampavitrika ny Fanavaozana ny rindrambaiko mpamily ao amin'ny menio manodidina izay hita, mba hahafahan'ny fitaovana sy manavao ireo mpamily azy.
Mikasika ny fanavaozana ny mpamily, mila ilainao koa raha mitady ho azy ny mpamily farany ajanony na eny tadiavo ny rindrambaiko mpamily amin'ny solosainao. Amin'ity tranga faharoa ity dia ampidino aloha avy amin'ny Internet ny rakitra fametrahana mpamily, mazàna dia fisie amin'ny endrika .exe.
Raha tsy izany, raha nampidina ireo mpamily fakantsary avy amin'ny Internet ianao, azonao atao ihany koa ny mametraka ilay fitaovana amin'ny alàlan'ny fanombohana ny rakitra mifanaraka aminy ary fanarahana ireo torolàlana hita eo amin'ny efijery: matetika dia ampy ny manindry ny bokotra imbetsaka. Avanti / Manaraka ary ao amin'izany Mametraka / mametaka ary miandry ny rakitra ilaina alain-tahaka amin'ny kapila. Amin'ny faran'ny fanamboarana, raha angatahina ianao dia avereno ny PC ary avereno avereno ny webcam.
Raha manana notebook ary te-hametraka webcam tsy misy CD ianao dia ampahafantariko anao fa ny dingana tokony harahina hanaovana izany dia mitovy amin'ny notondroiko tamin'ny dingana teo aloha teo amin'ny solosaina birao.
Ny hany maha samy hafa azy dia satria ny solosaina finday mazàna dia manana webcam natsangana teo an-tampon'ny efijery, raha tsy te hampiasa ity farany ianao, dia napetraka ho toerana misy anao mila miditra an-tsehatra ianao fikirana amin'ny programa izay kasainao hampiasa azy io sy / na ao Tetikasa Windows hanova izany fihetsika izany.
Mikasika ny fanovana ny fikirakirana ao anatin'ny programa dia miovaova arakaraka ny rindrambaiko fanovozan-kevitra ny fomba fampiharana. Mba hanomezana ohatra azo ampiharina dia tohizo Skype azonao atao ny misafidy webcam manokana amin'ny fipihana ny bokotra (...) hita eo an-tampon'ny efijery lehibe, mifantina ilay entana Fikirana avy amin'ny menio misokatra, mahatratra ny faritra Audio sy horonan-tsary amin'ny alàlan'ny ilany havia sy amin'ny fampiasana ny menio drop down Fakan-tsary.
Raha hisafidy ny webcam misy anao amin'ny alàlan'ny fikirakirana ny rafitra fiasa, alefaso fa tsy Fitaovana fitantanana fitaovanaamin'ny fipihana Bokotra hanombohana (ilay misy saina Windows) hita eo ankavanan'ny farany amin'ny barra de tareasmifantina ny rohy Tontonana fanaraha-maso manatrika fanombohana menio nisokatra ary, teo am-baravarankely dia niseho teo amin'ny efijery ilay feo Hardware sy feo ary / na inona Fitaovana fitantanana fitaovana (miankina amin'ny karazana efijery voalamina).
Rehefa mahita ny efijery Device Manager ianao dia tsindrio amin'izato lokony akaikin'ny lahatsoratra fakan-tsary, hanitatra ny lisitrao, avy eo tsindrio ny bokotra havanana amin'ny anarana webcam fa tsy te hampiasa anao intsony ianao, safidio ilay entana deactivate ao amin'ny menio mitantara izay manokatra sy manindry ny bokotra Eny, hanamafisana ny tanjonao.
Rehefa vita ireo dingana etsy ambony dia tsy ho hitan'ny programa na ny rafitra fikirakirana intsony ny webcam natsangana ary noho izany dia ho laharam-pahamehana ho azy ny webcam any ivelany.
Raha manana fisalasalana ianao dia azonao atao foana ny mamela ny webcam tafiditra, mamerina ireo dingana efa nolazaiko fa mikarakara, amin'ity tranga ity, hisafidy ny safidy Ampidiro fitaovana avy amin'ny menio manodidina hita maso aorian'ny fipihana tsara ny anaran'ny fitaovana ao amin'ny Device Manager.
Raha manana solosaina marika Apple ianao ary te hahafantatra ny fomba hanaovana azy mametraka webcam tsy misy CD amin'ny Mac, Mampahafantatra anao aho fa ny hany tokony ataonao dia ny mampifandray ilay fitaovana kasainao hampiasaina amin'ny solosaina ary miandry azy Mac OS fantaro izany amin'ny mandeha ho azy ary ataovy azo atao amin'ny fampiharana samihafa.
Raha tsy mahomby ny fanekena ny fitaovana mandeha ho azy dia ampidino azafady ny fonosana misy ireo mpamily ho an'ny Mac natokana ho an'ny modely webcam anao amin'ny Internet, mazàna izany dia fisie amin'ny endrika .dmg.
Avy eo sokafy ny rakitra vokatr'izany ary araho ny torolàlana eo amin'ny efijery mba hirosoana amin'ny fametrahana ireo singa ilaina. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia kitiho fotsiny ny bokotra Tohizo / tohizo mi Mametraka / mametaka ary manoratra, rehefa asaina, ny tenimiafina admin an'ny Mac.
Aorian'ny fametrahana ny webcam, azonao atao ny manomboka mampiasa azy ao anatin'ny rindranasa samihafa izay mampiasa azy. Mora izany, sa tsy izany?
Raha manomboka ny application izay kasainao hampiasa ilay webcam vao napetraka ianao dia mbola atolotra anao ny webcam. toerana misy anao (izany. FaceTime HD), hamahana azy dia ampy misafidy ny fitaovana fakana horonantsary hampiasaina, mazàna amin'ny alàlan'ny menio mitete-mitokana natokana na zavatra manokana ao amin'ny fikirana fampiharana. Manome ohatra azo ampiharina, ao amin'ny Photo booth tsy maintsy misafidy ny menio ianao fakan-tsary eo amin'ny ankavia ambony ary avy eo ny anarana webcam de Ity farany.
Jereo ireto namako vao haingana ireto